Markab laga soo daynayo Puntland - BBC Somali - Warar
Markab laga soo daynayo Puntland
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 15 December, 2012, 11:07 GMT 14:07 SGA
Burcada Soomaalida oo xirtay dadkii saarnaa shaqaale markab oo ay qabsadeen.
Maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada amniga ee badda ay isku dayayaan in la sii daayo markab ay qabsadeen burcad badeeed in ka badan laba sanno ka hor.
Waxaa ay sheegeen in saddex burcadbaddeed ah la dilay toddobaadkan horaantiisii, markii ciidamada amnigu ay joojiyeen doon burcad baddeed oo hub iyo sahay kale u sidday markabka calankiisu yahay Panama ee MV Iceberg One.
Xukuumadda ayaa sheegtay in howlgallada ay sii socdaan iyo in ugu yaraan afar askarta dowladda ah ay ku dhaawacmeen.
Warbaahinta gobolka ayaa sheegaysa in ugu yaraan askari ka tirsan dowladda uu ku dhintay iska hor imaadka.
Burcad-baddeednimada xeebaha ka baxsan Soomaaliya ayaa si muuqata u yaraatay sanadkan, balse tiro maraakiib ah iyo boqolaal shaqaalihii sarnaa ah ayaa wali la haystaa.